Smetanin Andrey - रूसी फुटबल गोल रक्षक। उहाँले सोभियत संघ मा आफ्नो क्यारियर सुरु भयो। सबैभन्दा लोकप्रिय मास्को "डायनेमो" बोल्ने, खरिद। उहाँले हाल मिनी-फुटबल क्लब "डायनेमो" को संरचना मा एक अग्रणी स्थिति धारण।
गोल रक्षक बाल्यकाल
Smetanin Andrey पर्म मा जुन 21, 1969 मा जन्म भएको थियो। प्रारम्भिक बाल्यकाल मा, पिता को दाखिला उहाँले फुटबल रुचि भए र स्थानीय विद्यालय खेलकुद मा भर्ना। ठूलो फुटबल स्थानीय "तारा" को संरचना बनेको पहिलो कदम। पहिलो 17 वर्षको उमेरमा 1986 मा क्षेत्र प्रवेश। त्यो समय मा, RSFSR विक्टर Slesareva को सम्मान कोच नेतृत्व एक टोली दोस्रो लिगमा प्रदर्शन।
Smetanin Andrey क्लब को मुख्य गोल रक्षक को एक बनेर, "स्टार" 20 म्याचको दुई मौसम बिताए। को 86th वर्ष मा टीम कांस्य पदक जित्यो, र 87th मा व्यापार वर्ग स्तरवृद्धि गर्न जा, दोस्रो लिग जित्यो। कि वर्ष मा, "स्टार" भर्खर 18 बलमा मा 42 खेल छुटेका छ। यस सिंहको योग्य र गोल रक्षक Smetanin।
साँचो, उहाँले पहिलो संघीय लिग मा टोली गएको छैन छ। एन्ड्रयू राजधानी एक मोहक प्रस्ताव प्राप्त।
1987 मा Smetanin Andrey एक पेन्सिल स्काउट्स राजधानी "डायनेमो" पायो र "सेतो-नीलो" को शिविरमा थियो नै सिजन मा। त्यतिबेला टोलीमा सोभियत फुटबल को कुलीन रूपमा काम गरे, तर सफलता को बदलिने डिग्री संग खेल्दै। उदाहरणका लागि, 88th वर्ष मा मात्र 10 औं स्थान सोभियत संघ को च्याम्पियनशिप मा, युरोपेली कप मा मार छैन सब।
गुणात्मक 1990 मा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्षम। "डायनेमो" 24 म्याचको आधा जित्यो र जित्यो कांस्य पदक। समय द्वारा शुरू लामबद्ध Smetanin Andrey मा हुन सबै बढी सम्भावना। फुटबल खेलाडी बस 13 राष्ट्रिय च्याम्पियनशिप खेल, 24 गोल छुटेका जो बिताए।
रूसी च्याम्पियनशिप मा
सोभियत संघ पतन पछि, धेरै खेलाडीहरू विदेश आफ्नो भाग्य प्रयास गर्न निर्णय गरेका छौं। तर तिनीहरूलाई मध्ये एक Smetanin Andrey थियो। फुटबल खेलाडी, जसको जीवनी लगभग सम्पूर्ण रूपमा "Dinamo" जोडिएको छ, क्लब मा थियो।
रूसी फुटबल को हाल को इतिहास मा 90 को दशक Smets को पहिलो आधा - "सेतो-नीलो" को मुख्य गोल रक्षक।
1992 मा, टोलीमा गम्भीर रूस पहिलो च्याम्पियनशिप मा विजय को लागि लडे। "डायनेमो" को प्रारम्भिक चरणमा पहिलो स्थान जित्यो। तर, पदक लागि लडाई मा उनि 14 को बाहिर मात्र6खेल जित्यो, ताकि तेस्रो स्थान लियो। भ्लाडिकाभकाज, "स्पार्टाकस" मा चाँदी र सुन जित्यो "Spartak" मास्को।
को 93 औं राजधानी "स्पार्टाकस" संग सँगै "सेतो-नीलो" फेरि तेस्रो, यो समय को वर्ष मा आफ्नो बेलग्रेड "रोटर" हरायो। को 94th टोली थप सफलतापूर्वक कार्य र जित्यो चाँदी पदक। तथापि, chempionu- "स्पार्टाकस" रूपमा समाप्त मा 11 अंक धेरै पैदावार।
को 95th मा, डायनेमो को पदक तालिका मात्र 4th ठाउँ पछि छन्। तर Smets व्यक्तिगत पहिचान achieves - उहाँले 33 भन्दा राम्रो खेलाडी नम्बरमा हुन्छ मौसम को अन्त मा। को goalkeepers बीच एक आदरणीय कांस्य थियो। को अगाडि सर्गेई Ovchinnikov राजधानी "लोकोमोटिव" बाट र भ्लाडिकाभकाज, "Spartak-Alania" को ढोकाहरू रक्षा Zaur Khapov।
को 96 औं "डायनेमो" फेरि चौथो, र Smets फेरि सर्वश्रेष्ठ goalkeepers बीच मा, यो समय च्याम्पियनशिप मात्र Ovchinnikov गुमाउने। 1997 औं आफ्नो स्नातक पछि, उहाँले मास्को "Spartak" प्रस्ताव सहमत, टोलीमा बाँकी, को नीलो र सेतो शिविर मा Smetanin गत थियो।
यसरी, "डायनेमो" प्ले लागि, उहाँले 128 बलमा छुटेका जो 120 मिलान, बिताए। उहाँले 1995 मा चाँदीका जित्यो र जित्यो एक पटक रूसी कप, तीन कांस्य पदक (को 97-एम अन्तिम समय) जित्यो।
रूस को च्याम्पियन
1998 मा, Smetanin Andrey - फुटबल, समयमा फोटो खेल समाचार पत्र को पृष्ठ शोभा बढाएका जो, मास्को "Spartak" जान्छ। यो टोलीसँग उहाँले अन्तमा गम्भीर च्याम्पियनशिप लागि झगडे। दुःखको कुरा, एक मात्र, यो त थप अक्सर पीठ देखि गर्छ।
29 वर्षीया गोल रक्षक रातो र सेतो अलेक्जेन्डर Filimonov प्रेस आशा Smets, तर बाद लगभग कारण दिनुभएन।
1999 र 2000 मा - फलस्वरूप, यस Permian गोल रक्षक दुई पटक रूस को च्याम्पियन भयो। तर यो "स्पार्टाकस," 11 लक्ष्य छुटेका जो 14 खेल को कुल को लागि सबै प्रतियोगिताहरु मा बिताए। राम्रो सूचक, तर देश को सबै भन्दा राम्रो टोली मा नम्बर एक गोल रक्षक बन्न पर्याप्त छैन। 2001 मा, Filimonov पछि तीन मौसम बिताएपछि Smetanin नयाँ क्लब खोज्न निर्णय गर्छ।
पहिलो विभाजन मा
र, दुःखको कुरा उहाँले एकदम यसको अवस्था गुमाए र Filimonov को छाया मा तीन वर्ष पछि अब देश मा सबै भन्दा राम्रो goalkeepers रूपमा कथित छ, "स्पार्टाकस" पीठ मा बसे रूपमा गोल रक्षक लागि।
फलस्वरूप, उच्च लिग को आदेश-नवोदित मात्र सार्न असमर्थ। Smets साराटोभ "फाल्कन" सारियो। यहाँ उहाँले दुई मौसम कार्य गर्दछ। र 2001 मा Saratovites यसको इतिहास मा सबै भन्दा राम्रो परिणाम हासिल यदि - 8th ठाँउ, 2002 मा, लिए अन्तिम ठाउँबाट दोस्रो विभाजन गर्न relegated 30 मिलान5WINS को कुल, जित्यो। यस मामला मा, Smets मुख्य गोल रक्षक थिएन। कुल 24 गोल छुटेका जो 19 खेल, बिताए।
Astrakhan "Volgar" - र 2002 मा उहाँले एउटा फरक टीम मा समाप्त भयो। दोस्रो राउन्ड लागि, उहाँले 14 खेल खेले, 19 लक्ष्य स्वीकारिएको र प्रथम श्रेणी मा निवास कायम गर्न टोली दिनुभयो।
2003 Smets दोस्रो प्रभाग मा सेवा, मास्को "टाइटन" मा थाले, र त्यसपछि एकाटेरिनबर्ग लागि प्ले "यूराल" इजेभ्स्क "Gazovik-Gazprom" र मास्को क्षेत्र टोली "Lobnya-अल्ला"।
उहाँले 2006 मा क्यारियर स्नातक। त्यसपछि, धेरै वर्ष को लागि त्यो खेल functionary मिनी-फुटबल क्लब "डायनेमो-2" को संरचना मा काम गरे। हाल उहाँले जूनियर स्कूल मा एक कोच रूपमा काम गर्दछ "मास्को को युवा", जसमा खेलाडी को मास्को "Spartak" को लागि तयार छन्।
विवाह गरे। तर आफ्नो निजी जीवन ढाकिएको छैन, संवाददाता कुनै पनि विवरण कहिल्यै बताउँछ।
फुटबल मा एक म्याच के हो?
कार्लोस वेला: मेक्सिकन स्ट्राइकर गरेको क्यारियर र रोचक यसलाई हैं
Roberto Baggio: को फुटबल क्यारियर मा सबै भन्दा राम्रो समय र
Shockproof विनिर्देश ट्याब्लेट मोडेल 2016
ग्रीस सबैभन्दा लोकप्रिय होटल।
को lightest धातु। ज्योति धातु कुन हो?
शिक्षाको बारेमा संज्ञानात्मक वचनहरू
सुकेको मासु: घर मा नुस्खा